eHarmony Inotangisa Saiti-Inoita Saiti Yemabasa… Srsly | Martech Zone
Jobho ekutsvaga masosi ari dime gumi nemaviri. Kune vazhinji vavo vashoma vavo vanotoedza kuzvitsaura nekuzviti ivo, "eHarmony" yemabasa. Maererano ne Dr. Neil Clark Warren, muvambi we eHarmony, "Havasi." Iye zvino kambani yake ine chigadzirwa chepamutemo chekuzviratidza uye ndiyo nzira yakanyanya kuchenjera uye yehunyanzvi kupfuura iwe zvaunogona kufunga.
Warren nechikwata chake chechigadzirwa chakatangisa Yakakwidziridzwa Mabasa neHarmony muLos Angeles svondo rapfuura. (Kuzivisa, ivo PR mutengi we Elasticity, iyo femu yandinoshandira, kuburikidza neBranded Strategies.) Chipuratifomu chinotora nzira inoenderana neyekuroora kubva kune yavo yepuratifomu uye inoishandisa kuchinetso chinowirirana nebasa. Asi ivo vaive vakangwarira kutsanangura kuti haisi yekufambidzana / yekuroora algorithm yakamisikidzwa mune yekutsvaga basa saiti.
"Isu takashandisa huzivi hwakafanana kubva pane zvatakasangana nazvo tichivaka injini yeHarmony uye takabvunza mibvunzo yakafanana nezvekufananidzwa nebasa," akatsanangura Steve Carter, Mutevedzeri weMutungamiriri weMatching kuHarmony, asi zvine chekuita netekinoroji iri kumashure kweElevated Careers. Iye nechikwata chake vakavaka algorithm yakasarudzika iyo inotora dhata kubva kune anotsvaga basa uye dhata kubva kune vangango vashandire vozozvifananidza pamwe chete nezvikamu gumi nezvitanhatu zvakakosha, zvakanyanya kufanana nehukama hwehukama makumi maviri neshanu hunoshandiswa nekutsvaga kwavo muchigadzirwa cheHarmony. Izvo zvinhu gumi nematanhatu ndezvechokwadi muridzi, asi zvinowira mumabhagidhi matatu makuru ekutarisisa: Hunhu, Tsika uye Hukama.
Saka kuibika, vagadzira basa rinoenderana nebasa, kwete basa rekutsvaga basa, kuti makambani anogona kubhadhara kunyorera kubva, mune dzidziso, inogona kubatsira sangano kuhaya vashandi vari nani kukwana, vane mukana wakawanda kubudirira uye kugara nekambani kwenguva yakareba. Izvo hazvigone chete kuwedzera kugadzirwa asi zvinoderedza zvinoshamisa mutengo wekuhaya vanhu vatsva. Turnover, sezvavanotaura munyika yeHR, chihure.
Vanotsvaga Jobho vanogona kushandisa saiti yemahara uye ine inotarisirwa yehunhu mhando yemibvunzo yeiri pane yekubhodhi maitiro. Kubva ipapo, saiti iyi inokurudzira vashandirwi izvo zvingave zvakakodzere hunhu hwako, hunhu hwetsika, ruzivo uye nezvimwe. Kana iwe wakambotora basa chete kuti ukurumidze kuona kuti hauna kukodzera mukati kana kuita setsika, unogona kuona kubatsirwa kwemunhu chimwe chinhu chakadai.
Uye sezvaungatarisira kubva kune wehukama nyanzvi, Warren akabvarura mhando dzese dzekufadza kuwirirana uye manhamba nezvekuti kana usiri kufara mubasa rako, zvinopinda muhupenyu hwako, hukama, hutano uye zvimwe. Nekudaro, mukukosha, Mabasa Akakwidziridzwa anogona kuita nharo zvinogona kubatsira kambani kuva nevashandi vanofara vanorarama hupenyu hunofadza uye yada yada.
Mibvunzo yangu, iyo yandinomira kwauri uye ndingade mhinduro yako mune zvakataurwa, ndeiyi:
Ko psychology yemunhu uye hukama hunogona kunyatso kubikwa pasi kune ongororo-inotungamirwa algorithm? Kuva vateereri vane hunyanzvi, fungidziro yangu ungati "hongu" asi zvakadii nezve kukanganisa kwemunhu pakupinda? Pandinenge ndichitsvaga basa, ndiri kunyanya kugona kutaura zvandinofunga kuti kambani inoda pane zvandinonzwa chaizvo, kufunga kana kutenda nezvangu semumiriri. Kunyange Basa Rakakwidziridzwa risingamisirwe seyakaenderera mberi kana kutsvagisa saiti, pfungwa ichizadza fomu iri ichave yeimwe, "Chii chandinofunga kuti vangangove vashandirwi vanoda kuti nditaure?"
Makambani ari kutora tekinoroji yezvinhu zvese kubva kushambadziro kuenda kunopa cheni uye kupfuura. Asi ivo vakagadzirira kuvimba nealgorithm yekusarudza, kana kubvisa-kusarudza, vanotarisira basa? Ichokwadi chiri nani pane kutarisa kwavo Facebook peji rehwahwa bong bong pics, uye Yakakwidziridzwa Careers enzanirana haizove yekupedzisira yekuhaya sarudzo kune chero munhu, asi sei kuda kuisa mari muhunyanzvi maHR mashandiro, chaizvo?
Chii chinoitika kune vanotsvaga vanobhadharwa kuisa vavhoterwa apo hunhu / tsika / hukama mutambo ungashanda uchipesana nevanotsvaga basa?
Kusvika kwakadai kunogona kusvika seiko? Tinogona here kugadzira algorithm yekufananidza vamiririri nevatengi? (Ndingafarire kuona iyo data. Heh.) Zvirokwazvo nzira imwecheteyo inogona kushanda kune hukama hwevatengesi nevadikani. Asi zvinoda imwe nhanho yechitatu-bato ongororo yemasangano anobatanidzwa. Makambani mangani achanyatso kuvhura mikova yavo kuhunhu hwesangano?
Ini ndinoona Yakakwidziridzwa Mabasa anonakidza. Zvichava zvinonakidza kuzviona zvichishanda. Saka mubvunzo chaiwo unosara: Iwe unofungei? Unogona kuishandisa semaneja wekuhaya kana iwe uchikwanisa kuwana? Ungaishandisa here semunhu anotsvaga basa? Makomendi ndeako.
Tags: ShanduroeHarmonymabasa akakwidziridzwaHR techzviwanikwa zvevanhubasa rinoenderanaenzanisa tekinoroji
Jason Falls ndeye SVP yeDhijitari Strategic pa Elasticity, kambani yekushambadzira yedhijitari ine mahofisi muSt. Louis, Chicago neLouisville. Iye munyori wemabhuku maviri ezvekushambadzira kwedhijitari, anowanzo kutaura mutauri pamusoro wenyaya uye muongorori wezvekudyidzana kwevanhu Bata naye pa jasonfalls pane mazhinji masocial network.